टिप्स एण्ड ट्रीक्स Archives - Page4of6- Living with ICT
Home / टिप्स एण्ड ट्रीक्स (page 4)
टिप्स एण्ड ट्रीक्स
अकाउन्ट खोल्दादेखि हालसम्मका ट्वीटहरुको पूर्ण विवरण पाउने तरिका
Mar 24, 2015	0
ट्वीटरले तपाईँलाई केही मात्रामा मात्र आफ्ना ट्वीटहरुको इतिहास हेर्न दिन्छ । वर्षौँदखि आफूले गरेका ट्वीटहरु हेर्न चाहेर पनि हेर्न नपाउनु भएको हुनसक्छ । तर तपार्इँले ट्वीटरमा आफ्नो ट्वीट आर्काइभ डाउनलोड गर्न रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाईँको आर्काइभमा ट्वीट तथा रिट्वीटहरुको सर्च गर्न मिल्ने संग्रह समावेश गरिएको हुन्छ । यसरी तपार्इँले आफूले अकाउन्ट खोल्दाको समयदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण ट्वीटहरुको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ …
स्मार्टफोनमा मोबाइल डाटा जोगाउने ४ प्रभावकारी तरिकाहरु
Mar 23, 2015	2
के तपाईँ मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? अनि डाटा प्याक लियो, छिनमै सकिएर हैरान हुनुहुन्छ ? तपाईँलाई थाहा छ त कसरी यति छिटो डाटा अनि तपाइको ब्यालेन्स सकिन्छ ? यस्तो हैरानीमा हुनुहुन्छ र दुबिदामा पर्नुभएको छ भने अब तपाईँले यस्तो समस्या झेल्नुपर्ने दिन गए । हामीले तल तपाईँले कसरी मोबाइलको डाटा जोगाउन र निर्धक्क भएर मोबाइल टाडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ …
अब एन्ड्रोइडबाट वाट्स्एप भोइस कलिङ्: हेर्नुहोस् एक्टिभेट गर्ने तरिका
अब एन्ड्रोइड फोनप्रयोगकर्ताका लागि पनि वाट्स्एप भोइस कलिङ् फिचर उपलब्ध भएको छ । विश्वभर ७० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु बनाउन सफल संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय म्यासेजिङ् एप वाट्स्एप एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुका लागि भोइस कलिङ् फिचर उपलब्ध गराएको हो । यदि तपाई एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न भने यो यो फिचर प्रयोग गर्न अरु केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको प्रतीक्षाको घडिभने …
के हो रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन ?
Dec 14, 2014	1
स्मार्ट डिभाइसहरुको बढ्दो प्रयोगसँगै मोबाइल, ट्याब्लेटअनुकुल वेबसाइटहरुको माग पढ्दै गएको छ। माइक्रोसफ्टको तथ्यांकअनुसार लगभग आधा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु लोकल सर्चको लागि मोबाइल को प्रयोग गर्दछन। ८६५ भन्दा बढी मानिसहरु टिभी हेर्दै मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने गर्छन। बिभिन्न साइजमा उपलब्ध मोबाइल, ट्याब्लेटजस्ता डिभाइसहरुले मान्छेलाई इन्टरनेटको पहुँचमा सजिलो बनाइदिएको छ। ठाउँ, समय र परिस्थितिअनुसार मानिसहरु घर, अफिस, यात्रामा फरक-फरक डिभाइसहरुको प्रयोग गर्न रुचाउछन। यसरी …
एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ ? सावधान ! नयाँ ट्रोजन भाइरसले गोप्य पासओर्ड चोर्दै छ
तपाई एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान ! अहिले यस्तो संक्रमित भाइरस फैलिरहेको छ, जसले एन्ड्रोइड सिस्टमबाट चल्ने फोनहरुको सिस्टममा विनाश गरिरहेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इण्डियाको एक समाचारअनुसार एन्ड्रोइड फोनको सिस्टमलाई क्र्यास गरेर फोन प्रयोगकर्ताका महत्वपूर्ण सूचना चोर्ने खतरानाक ट्रोजन भाइरस अहिले सर्वत्र फैलिरहेको छ । यो भाइरसलाई ‘एन्ड्रोइड एसएमएस सेन्ड’ (AndroidSmssend) नाम दिइएको छ । यो भाइरस …
कसरी हुन्छ वेबसाइट ह्याक ? कसरी गर्ने सुरक्षा ?
Nov 5, 2014	1
आजको यो सूचना प्रविधिको युगमा सामान किन्नेदेखि लिएर जागीर खोज्नसम्म सबै सूचना वेबमा प्रकाशित हुन थालिसकेका छन् । व्यापार–व्यवसाय गर्नेदेखि स्कुल कलेजहरूले, व्यक्तिगत ब्लग लेख्नेदेखि लिएर सरकारका सूचना सम्प्रेषण गर्ने सबै काम वेबमार्फत नै गरिन थालेको छ । जतिजति सूचनाहरू वेबमा प्रकाशित हुँदै जान्छ, त्यति त्यति नै त्यसलाई सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने पनि एउटा चुनौती बनेर उभिएको छ । एउटा …
के हो आरएफ च्याटिङ एण्ड रिमोट कन्ट्रोलिङ ?
प्रायजसो कम्पनी, उद्योग तथा संघ संस्थाहरुमा एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा कुनै सन्देश पठाउनुपर्यो भने मोवाइल, टेलिफोन वा इन्टरनेट नै प्रयोग गरिन्छ । मानौ कि, कलेजमा प्रिन्सिपल कक्षबाट क्यान्टिनमा चिया अर्डर गर्नुपर्यो अथवा साइन्स डिपार्टमेन्टमा लाइब्रेरी ब्लकबाट किताब मगाउनु पर्यो भने कि त टेलिफोन डायल गर्नुपर्छ, कि त एकजना सन्देशवाहक व्यक्ति नै खटाउनु पर्ने हुन्छ । यसैगरी स्कुल, कलेज तथा अन्य …
कम्प्युटर भाइरस र सुरक्षाको उपायहरु
कम्प्युटर भाइरस भन्नाले त्यस्ता कम्प्युटर प्रोग्रामहरूलाई जनाउँछ, जुन एक बाट अर्को कम्प्युटरमा सर्ने तथा कम्प्युटरमा खराब प्रकारका कार्यहरू गर्ने गर्दछ। भाइरसहरू कम्प्युटरमा फाइल तथा डेटाहरू बिगार्ने देखि लिएर पुरै हार्ड डिस्क नै बिगार्ने पनि हुने गर्दछन्। भाइरसहरू विशेषत इमेलको माध्यमबाट सर्ने भए तापनि अचेल पेन ड्राइभबाट सर्ने भाइरस पनि निकै ठूलो मात्रामा देखिएको छ। -भाइरस लागेमा निम्न लक्षणहरू कम्प्युटरमा देखा …
इमेल लेख्दा ध्यान पुर्याेउनु पर्ने केही कुराहरू
Jun 9, 2014	1
इमेल आधुनिक सूचना प्रविधिको युगको एक अपरिहार्य सञ्चारको माध्यम भइसकेको छ। पठाएको केही सेकेन्डमै विश्वको एक कुना देखि अर्को कुनामा सन्देश पठाउन सकिने यस प्रविधिले हामी सबैको जीवनशैलीमा अवश्य नै परिवर्तन ल्याएको छ। चिठीको तुलनामा इमेललाई निकै नै अनौपचारिक तथा बढि व्यक्तिगत प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। साथीभाईहरुलाई सन्देश पठाउँदा जस्तो सुकै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि औपचारिक कार्यहरूका निम्ति …
ब्याट्री चाडो सकिएर हैरान हुनुहुन्छ, यसरी बचाउनुस् स्मार्टफाेनकाे ब्याट्री
हातहातमा स्मार्टफोन पुगेका छन् तर सबैको समस्या एउटै – ब्याट्री टिक्दै नटिक्ने । कुनै बेला थियो एक पटक चार्ज गरेर हप्ता दिनसम्म पनि मोबाइलले काम गरिरहन्थ्यो । तर त्यस्ता फोनमा कल गर्न र म्यासेज गर्न बाहेक अरु मोर्डन फिचर अटाउँथेनन् । मोबाइल टेक्नोलोजीमा आएको विकासका कारण स‌‍‌‍सार नचाउने स्मार्टफोन बन्न थाले तर मोबाइल कम्पनी उच्च ब्याट्री लाइफ भएका स्मार्टफोन बनाउन …